အမြန်အခြောက်ခံခြင်း Ultra-stick Liquid Multi Fabric Sew Glue | WoopShop®
အခြောက်မြန်သော Ultra-stick Liquid Multi Fabric Sew Glue
50ml / တရုတ်50ml / ပြင်သစ်50ml / ပိုလန်50ml / စပိန်50ml / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း50ml / ချက်သမ္မတနိုင်ငံ50ml / ယူနိုက်တက်စတိတ်50ml / ဘယ်လ်ဂျီယံ
အခြောက်မြန်သော Ultra-stick Liquid Multi Fabric Sew Glue - 50ml / တရုတ် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE၊ Dot
အမျိုးအစား- Ultra-stick Sew Glue
Size: 15 x ကို 4cm
Ph တန်ဖိုး: 10-11
Net ကအကြောင်းအရာ: 50ml
အသုံးချ Arange- ဂျင်းဘောင်းဘီ ဘောင်းဘီများ/ Tent tienda/ ကော်ဇော alfombra
အရောင်- အဖြူ သန့်သန့် အရည်၊ အမှုန်အမွှား မရှိပါ။
အစိုင်အခဲအကြောင်းအရာ - ≥45%
အသုံးပြုထားသော အပိုင်း- ဂျင်းဘောင်းဘီ ပန်တာလိုးများ/ တဲကြိုးများ/ ကော်ဇော အယ်လ်ဖိုဘရာ/ Sunshade quitasol/ ပြတင်းပေါက် ကုလားကာ/ ဖိနပ်/ တဲများ
ပြုပြင်ပြီးပါက အခန်းအပူချိန်တွင် 24 နာရီကြာ ကုသပေးပါသည်။
အသုံးမပြုသောကော်၏ အပူချိန် အလွန်မြင့်မားပါက၊ သိုလှောင်မှုသက်တမ်းကို တိုတောင်းလိမ့်မည်။
အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် အေးခဲပြီးနောက်၊ ၎င်းကို အခန်းအပူချိန်တွင် ပျော်ဝင်ပြီးနောက် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုနိုင်သော အပူချိန်အကွာအဝေးမှာ -20°C မှ 70°C ဖြစ်သည်။
ချုပ်စရာမရှိတော့! ချယ်လှယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အထည်၏တစ်ဖက်သို့ ကော်ပါးပါးလေးလိမ်းပြီး အခြားအထည်တစ်ထည်တွင် ကပ်ပါ။ မှန်ကန်ကြောင်း စက္ကန့် 30 နှိပ်ပြီး ပြီးပါပြီ။
ဤကော်သည် ကော်ကိုအသုံးပြုပြီးသည်နှင့်ပင် အသေးအဖွဲပြင်ဆင်မှုအချို့အတွက် အချိန်ပေး၍ 1 မိနစ်မှ2မိနစ်ခန့်အတွင်း ခြောက်သွေ့သွားပါသည်။ စနစ်တကျလိမ်းပြီးရင် 24 နာရီအတွင်း ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ဤအခြောက်မြန်သောကော်သည် အထည်၊ ပိတ်ချော၊ မိုးပြာရောင်၊ ခံစားစရာ၊ suede၊ သားရေ၊ ချည်၊ polyester၊ ဖလန်နယ်၊ ပိုးထည်၊ ဓာတုနှင့် နိုင်လွန်အပါအဝင် မည်သည့်အထည်အမျိုးအစားနှင့်မဆို အဆင်ပြေသည်။
အပြည့်အဝပျောက်ကင်းပြီးနောက်၊ ကော်သည် အရောင်ကြည်လင်လာပြီး ပျော့ပြောင်းပြီး ပျော့ပြောင်းနေမည်ဖြစ်သည်။ အပြည့်အဝကုသပြီးနောက်၊ ၎င်းသည်ရေစိုခံပြီးမြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အဆိပ်မရှိသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကော်ရည်သည် ဘေးကင်းကြောင်း သက်သေပြထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အများစုတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်မထိဘဲ အခန်းအပူချိန်မှာ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ သံချေးတက်ခြင်း နှင့် အရေပြားကို ယားယံခြင်း မရှိပါ။
မဖွင့်မချင်း အရာအားလုံးသည် ဖော်ပြချက်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
ဖော်ပြချက်ပါအတိုင်း မသုံးရသေးပါ။ ပေးပို့ထားတာ တော်တော်ကြာပါပြီ။
ဒါလည်း ရှိပြီးသားပါ။ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။
ရှည်လျားသောပေးပို့မှု၊ အရည်အသွေးကောင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!
ဖောက်သည် 4.9 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 148811 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
★ Judge.me ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံက ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ရွာရဲ့ အရွယ် ၅၀ မှာ တင်းကြပ်လို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေချင်ခဲ့တယ်။ Synthetic Fabric ၊ ဓာတ်ပြုထားသော်လည်း သာယာသော နှင့် Rinser သည် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးလိမ့်မည် ။ အပ်ချုပ်ခြင်း၊ အချို့နေရာများတွင် ချည်ကြိုးများ ကပ်ထားသော်လည်း မစိုးရိမ်ရသော်လည်း လည်ပင်းတွင် ပြဿနာရှိသည်။ ဖုံးကွယ်ရတာ မှားတယ်၊ အထည်က ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ မအိပ်ဘူး၊ ဖျတ်လတ်တယ်၊ ငါပဲလက်ထပ်ဖြစ်ရင် ယေဘူယျအားဖြင့်၊ အထူးသဖြင့် ပိုက်ဆံအတွက် ဝတ်စားဆင်ယင်တာကို ကြိုက်တယ်။
Ткань достаточно тонкая, но не просвечивает။ на параметры Ог 87- От 74 - Об 103 размер S по бёдрам сел хорошо, в груди очень свободно, шшужен буд-тьта
Unisex အင်္ကျီလက်ရှည် ဘောင်းဘီတိုဖြင့် ချည်ထိုးထားသော ကလေးအင်္ကျီ
အမျိုးသားများအတွက် Multi-Pocket Ribbons ကုန်တင်ဘောင်းဘီ
ကလေးမိန်းကလေးများအတွက် Lace Ruffle Sleeveless Romper နှင့် Mini Tulle စကတ်